Indawo yokuhlala yaseCinnamon uKerinci
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguRolis
Ndihlala elalini, embindini wepaki yelizwe kerinci seblat, eKerinci, eSumatra.Abantu bayibiza ngokuba yintlambo eyimfihlo kuba ababaninzi abantu abaziyo ngendawo yethu emangalisayo. Uninzi lwabantu kuluntu lwethu lusebenza ngesinamoni kunye nekofu.
Sinamagumbi amabini atofotofo. Ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela ziya kwabelwana.
isikuta, irenti yemoto kunye neekhenkethi ukuya kwi-Mt Kerinci, i-7 yeentaba zechibi, i-blue lake, inokulungiswa ngokulula.
Isidlo sakusasa sasimahla ukuba uthatha ukhenketho lwethu lwasehlathini. :)
Siyakwamkela endlwini yethu yosapho. Sinikezela ngamagumbi ama-2 atofotofo:
Igumbi loku-1: ibhedi ephindwe kabini kunye nebhedi eyodwa enokuhlala abantu abathathu.
Igumbi lesi-2: iibhedi ezimbini zabantu abangabodwa ezinokuthatha abantu aba-2 ubuninzi.
Igumbi lokuhlambela ekwabelwana ngalo
Ikhitshi ekwabelwana ngalo.
Uya kufumanisa ukuba kunjani ukuhlala kwilali entle. Abakhenkethi abaninzi abeza kule lali ke uya kuhlala phakathi kwabahlali kwindawo engekachukunyiswa. Kukho inkcubeko eyomeleleyo kwaye wamkelekile ukuba ujoyine kwiminyhadala kwaye udibane nabo bonke abantu bendawo ukuba babe yinxalenye yayo.
Siyosa ikofu yethu kwaye wamkelekile ukujoyina ukubona inkqubo, kunye nenkqubo yesinamon.
Kwaye ngokuqinisekileyo uya kuyonwabela indawo yethu.
Sijikelezwe ziinduli, intsimi yerayisi kunye nembono yehlathi, imizuzu emi-5 ukusuka kwintengiso yemveli, imizuzu engama-30 ukusuka kwisixeko saseSungai penuh.
Umbuki zindwendwe ngu- Rolis
Ndinguye kunye nabasebenzi bethu banokuhlala bekunceda ngovuyo ebaleni kwaye baququzelele uhambo lwakho.